May 14, 2020 – Xorriya Online
Xorriya Online: Masuuliyiinta wasaaradda beeraha iyo Waraabka Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixiyey sidii Soddon sano kadib ay Soomaaliya u heli laheyd diyaaradahaan loogu talo galay in lagu buufiyo Ayaxa si loo soo afjaro dhibaatada uu ku haya beeraleyda Soomaaliyeed, iyadoo ay xusid mudantahay inuu xilliyadii dambe baabi’iyey dalagyo badan. Xaflad kooban oo ka dhacday […]
Madaxweyne Farmaajo oo Magacaabay Guddoomiyeyaasha maxkamadda gobolka Banaadir iyo tan Racfaanka
Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay Guddoomiyeyaasha Maxkamadda Gobolka Banaadir iyo Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir kaddib soojeedin ka timid Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Mudane Baashe Yuusuf Axmed Madaxweynaha ayaa xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir waxa uu u magacaabay Garyaqaan Cabdikhadar Maxamed Xasan oo ku takhasusay Shareecada iyo Qaanuunka. Waxa uuna xilkaas ka […]
Soomaaliya oo dadka uu ku dhacay Coronavirus gaaray 1,284 iyo Wararkii ugu dambeeyay
Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa galabta ku faahfaahisay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka Coronavirus ee guud ahaan Soomaaliya. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in la diiwaan geliyay 65 xaaladood oo COVID-19 ah, 5 qofood oo xanuunka ka boqsootay iyo hal bukaan oo u geeriyooday. Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga […]
Ciidamada Xoogga dalka ayaa ka warbixayay howlgal ay ciidamada dowlada Soomaaliya ku dileyn sarkaal ka tirsanaakooxda Al-shabaab. Taliska ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay howlgal ku dilayn Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab iyo maleeshiyo la socotay inta u dhaxeysa deegaanka Janaale iyo degmada Qoryooley. Taliyaha Ciidanka dhulka ee Xoogga dalka Sareeye Guuto C/xamiid Maxamed Dirir ayaa […]
Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay degmooyinka laga soo tuuro hoobiyeyaasha
Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheagay degmooyinka laga soo tuuro hoobiyeyaasha lagu beegsado xarunta Xalane iyo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasada Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay in degmooyinkaas ay yihiin Wadajir, Dharkanley iyo Kaxda. Tuulax ayaa sheegay in dhowr jeer saddexdan degmo ee gobolkan Banaadir laga soo tuuray hoobiyeyaal […]
Iska horimaad dagaal oo aad u culus ayaa xalay waxa uu ka dahacay magaalada Muqdisho kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada booliiska iyo kuwa malitirga ah. Dagaalka oo ka dhacay Xaafada Zone K ee degmada Hodan ayaa sigaar ah waxaa uu udhexmaray Ciidamo ka tirsan Booliska iyo kuwa […]
Madaxweynaha Puntland oo wareegto ku magacaabey taliyeyaal ciidan
Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa Xeer Madaxweyne Lr. 42 ee May 14, 2020 ku magacaabay Taliyaha iyo Taliye ku-xigeenka ciidamada madaxtooyada Puntland. Madaxweynaha Maamulka Puntland, Markuu arkay : Dastuurka Puntland Qodobkiisa 80aad. Markuu arkay: Dadaalkooda iyo Kartidooda Ciidanimo oo ay muujiyeen. Markuu Tixgeliyey: Baahida loo qabo in isbedel lagu sameeyo Taliska Ciidanka.Wuxuu xeeriyey: […]
Midowga Afrika ayaa soo jeediyay in hal sano oo dheeraad ah loogu daro joogitaanka Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Madaxa golaha ammaanka iyo nabadda Smail Chergui ayaa isbuucaan u sheegay guddiga in ay muhiim tahay sii socoshada howlaha AMISOM ee Soomaaliya , taas oo ay ku ilaalinayaan nabadda durbana muuqata ee la gaaray, lana xaqiijiyay guulo […]
Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyey inay u gefayaan kadib markii Washington ay sheegtay in kooxo internet-ka jabsada oo Shiinees ah ay isku dayeen inay xadaan cilmi-baaris la xiriirta horumarinta talaalka cudurka Coronavirus. Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay in kooxahan internet-ka jabsada ay isku dayeen inay helaan xog la xiriirta tallaalka iyo daweynta coronavirus, ayaga oo […]
Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka Itoobiya
Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla Hamdok ayaa sheegay iney dowladdiisu aqbaleyn fikirka Itoobiya ka soo yeedhay. Dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan wadahadalladi u dhaxeeyey ee xalka looga raadinayey muranka biya xireenka ka dhashay ayaa istaagay. Hasayeeshee, Masar ayaa toddobaadkan cabashadeeda ku aaddan Wabiga Nile ee Itoobiya kala dhaxeeyo u gudbisay qaramada midoobay. Ra’isal wasaaraha Suudaan Cabadalla […]